‘सबै बोट नै सुक्या छ त अनि के फलोस्,’उनले भने ।किन बोट सुक्यो ?
अनि मान्छे के खाएर बाँच्या छन् त ? ‘के हुनु नि, मैलै यहाँबाट भरथेग गर्‍या छु । एकजना दाइलाई घरको रेखदेख गर, कमाइ भए खाउ भनेर यता आइयो, पहिले त ठिकै थियो । यसपाली त विजोगै छ । त्यसै छोड्नु न आफू गएर बस्नु ?’ अनि तपाईको यो सानो व्यापारले आफू खानेकि, कोठा भाडा तिर्ने कि, उता गाउँको दाइलाई भरथेग गर्ने ? ‘अब नगरी सुख भयो त ?’ उनले बाध्यता बताए ।उनी फेरि अर्काे ग्राहकसित रायोको सागको भाउ बताउँदै थिए । ग्राहक मुठामा ५ रुपैयाँ कम गर्ने प्रयास गर्दै थिए ।